७९ करोडको कृषिजन्य वस्तु जिल्लाबाहिर- कर्णाली - कान्तिपुर समाचार
७९ करोडको कृषिजन्य वस्तु जिल्लाबाहिर
कार्तिक १८, २०७५ विप्लव महर्जन
सल्यान — जिल्लाबाट यस वर्ष ७९ करोड ३३ लाख ५५ हजार रुपैयाँको कृषिजन्य वस्तु जिल्लाबाहिर गएको छ  । कृषि ज्ञानकेन्द्रका अनुसार कपुरकोट, रामपुर र सल्लीबजार हुँदै कृषिजन्य पदार्थ जिल्लाबाहिर गएका हुन्  ।
सल्यानको कपुरकोट हाटबजारमा किसानले बिक्रीका लागि ल्याएका तरकारी । तस्बिर : विप्लव/कान्तिपुर
अधिकांश कृषिजन्य सामग्रीमा सल्यान आत्मनिर्भर छ । जिल्लाबाट तरकारी, सुन्तला, अदुवा, मह, भटमास जिल्लाबाहिर जाने गरेको केन्द्रले जनाएको छ । केन्द्रका अनुसार यहाँको कृषिजन्य उत्पादन बुटवल, दाङ, पोखरा, काठमाडौं, नेपालगन्ज हुँदै भारतसम्म जाने गरेको छ ।
जिल्लामा उत्पादित टिम्मुर फ्रान्स निर्यात हुने गरेको केन्द्रका योजना अधिकृत पृथ्वीराज लामिछानेले बताए । उनका अनुसार कृषिजन्य पदार्थ जिल्लाबाहिर जान थालेपछि किसानको जीवनस्तर सुध्रँदै गएको छ । किसानले व्यावसायिक रूपमा तरकारी, सुन्तला, अदुवा, टिम्मुरलगायत खेती गर्न थालेको उनले बताए ।
जिल्लाका विभिन्न ठाउँबाट ३० करोड ३७ लाख रुपैयाँको १६ हजार पाँच सय मेट्रिक टन सुन्तला जिल्लाबाहिर गएको छ । कपुरकोटलगायत विभिन्न हाटबजारबाट १९ करोड ९७ लाख रुपैयाँको ३४ हजार ६ सय मेट्रिक टन तरकारी, २३ करोड ९० लाखको ५ हजार ६ सय मेट्रिक टन अदुवा र सात करोड ४७ लाख ६० हजारको ३ सय ४४ मेट्रिक टन अदुवाको सुठो जिल्लाबाहिर गएको छ ।
कृषि ज्ञान केन्द्रका प्रमुख तथा वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत अमरराज शर्माका अनुसार तीन सय ५० मेट्रिक टन बेसार, तीन हजार मेट्रिक टन तरकारी बीउ र चार सय ६० मेट्रिक टन मकैको बीउ जिल्लाबाहिर गएको छ । उनका अनुसार जिल्लाबाट केरा, आलु, मह , माछा, च्याउ बाहिर जाने गरेको छ ।
‘तरकारी खेतीबाट जिल्लाभरिका सात हजार ९ सय ७५ घरपरिवार व्यावसायिक बनेका छन्, कोटमौला, कोटबारा, दमाचौर, पिपलनेटा, मार्के, सेजवालटाकुरा, कजेरीलगायत गाउँका एक हजार घरधुरीले व्यावसायिक सुन्तलाखेती गरिरहेका छन्,’ उनले भने, ‘जसबाट किसानको जीवनस्तर गुणस्तरीय बन्दै गएको छ ।’
शारदा नदी आसपासका क्षेत्रमा करिब एक हजार दुई सय प्लास्टिक घर बनाई स्थानीयवासीले ४८ हजार वर्गमिटरमा गोलभेंडा खेती गरेका छन् । जिल्लाभरका ७५ प्रतिशत घरधुरी कृषिजन्य उत्पादनबाट आत्मनिर्भर बनेको केन्द्रले जनाएको छ ।
प्रकाशित : कार्तिक १८, २०७५ १०:२६
कृषि उद्यमले घटायो गरिबी
कार्तिक १८, २०७५ कान्तिपुर संवाददाता
सुर्खेत — सुर्खेतसहित कर्णाली प्रदेशका सात जिल्लामा कृषि उद्यममार्फत गरिबी घटेको अनुसन्धानका क्रममा पाइएको छ  ।
स्याउ, अदुवा, खसीबोका, बेमौसमी तरकारी, टिमुर, बेसार र तरकारीको वीऊ उत्पादनबाट झण्डै १६ हजार कृषकको आम्दानीमा बृद्धिसँगै जीवनस्तर गुणस्तरीय बनेको अनुसन्धानले देखाएको छ ।
उच्च मूल्य कृषि विकास बस्तु आयोजनाले सुर्खेतसहित दैलेख, कालिकोट, जुम्ला, जाजरकोट, सल्यान र अछाममा उच्च मूल्य कृषिबस्तुको उत्पादनमा सात वर्षदेखि बिभिन्न सहयोग गर्दै आएको छ । सात बर्षको अवधिमा किसानको आम्दानी प्रतिपरिवार १० हजारले बृद्धि भएको छ ।
आयोजना सुरु गर्दा कृषकको आम्दानी बार्षिक ३० हजार थियो भने अहिले ४० हजार रुपैयाँ पुगेको छ । कार्यक्रम लागू पूर्व अति गरिव २६ प्रतिशत रहेकोमा अहिले त्यो संख्या पाँच प्रतिशतमा झरेको छ । यस्तै ४४ प्रतिशत रहेका मध्यम गरीबको संख्या घटेर २४ प्रतिशतमा झरेको छ ।
पहिले खान पुग्नेको संख्या १० प्रतिशत रहेकोमा अहिले त्यो बढेर ३५ प्रतिशतमा पुगेको अनुसन्धानमा संलग्न माउण्ड डिजिट प्रालिले जनाएको छ । ६ महिना लगाएर अनुसन्धान गरिएको थियो । प्रालिका टिम लिडर डा. मधुसुदन भटराई र डा. निर्मल विश्वकर्माले अनुसन्धान गरेका हुन् ।
अनुसन्धानबाट सबैभन्दा धेरै तरकारीको बीउका कारण आम्दानीमा बृद्धि भएको पाइएको छ । आयोजनाले उच्च मूल्य कृषि बस्तुमा ६५ करोड ८२ लाख रुपैयाँ लगानी गरेको थियो । १३ हजार ५ सय घरधुरीलाई लक्षित गरी थालिएको कार्यक्रममा १५ हजार ९ सय ६५ घरधुरी लाभान्वित भएको आयोजना प्रमुख राजेन्द्रप्रसाद भारीले बताए ।
प्रकाशित : कार्तिक १८, २०७५ १०:२५
कर्णालीमा बढ्दै महिला हिंसा
हिमालमुनि रनिङ शिल्ड
सडक पुग्यो, गाडी चलेन
जिल्लामा छैनन् चिकित्सक
अझै भेटिएनन् चन्दननाथका मूर्ति
मृतकको सम्झनामा चिटिम